केसीका मागलार्इ सरकारले बुझ पचाएजस्तो गरेको छ: सुशीला कार्की | Alagdhar
घरबिचारकेसीका मागलार्इ सरकारले बुझ पचाएजस्तो गरेको छ: सुशीला कार्की
केसीका मागलार्इ सरकारले बुझ पचाएजस्तो गरेको छ: सुशीला कार्की
काठमाडौँ — निदाएको बेला पनि चिन्ता लाग्छ, डा. केसीलाई के भयो होला भनेर। बिहान उठेपछि पनि मोबाइलमा खबर हेर्छु। घडीको सुईजस्तो मन खित्रिकखित्रिक भइरहन्छ। सरकारको मानो खाएर के बोलेको भन्लान् तर विवश भइयो। किनकि एउटा मान्छे मृत्युशय्यामा छ। डा. केसीले आज जे मागेका छन्, त्यो उनले आफ्ना निम्ति मागेका होइनन्। जनताका निम्ति, तपाईं-हाम्रा निम्ति मागेका हुन्।
देशमा आदर्श सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य भएसम्म सुलभ गराउनुपर्छ। कसलाई भन्दा गरिबहरूलाई, अशक्तहरूलाई। जनताको स्तर वृद्धि गर्ने हो भने गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउनुपर्छ, धनीकालाई होइन। धनीकाले धन खर्च गर्छन्। डा. केसीले त्यही मागेका हुन्। गरिबलाई शिक्षा देऊ, स्वास्थ्यसेवा सुलभ गराऊ भनेका हुन्। अहिलेको सरकारले यसलाई बुझ पचाएर नजानेजस्तो गरे पनि जनताले बुझेका छन्। जनता उनको पक्षमा छन्।
म सरकारसँग अनुरोध गर्छु कि डा. केसी र उनीजस्ता अनुयायी कुनै दलका कार्यकर्ता होइनन्। आफ्नो शासनको शैलीमा डा. केसीलाई कहिले कांग्रेस भनेको छ, कहिले अरूलाई कांग्रेस भनेको छ, त्यो बेकार हो। सबैले बुझेका छन्, डा. केसीले जनताको आवाज बोलेका छन्। केसीले नेपालबाट केही लाँदैनन् मरेर जाँदा, उनी त अमरत्व प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति हुन्।
सरकारसँग अनुरोध गर्छु- उहाँको माग पूरा गरौं, गर्नैपर्छ। अमेरिकामा बिल गेट्सले जति कमाउँछन् जनतामा लगेर बाँडछन्। अस्ति खेलाडीले विश्वकप जित्दा आमजनतालाई लगेर बाँडे। नेपालमा कमाउने व्यक्तिले त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्र बनाएको सरकारले देखाइदिन सक्छ? त्यस्ता व्यक्तिलाई किन पोस्ने? म सरकारमा बसेका, पढेलेखेका व्यक्तिलाई समाजवाद, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र सिकाउन आएको होइन। तर, बुझ्नुपर्छ- समाजवाद कसरी लागू हुन्छ भनेर। आमजनता, गरिबलाई उठायो भने मात्र समाजवाद हुन्छ। एउटा ठेकेदारलाई मोटो बनाएर के हुन्छ?
त्यो व्यक्तिबारे मैले अस्ति युटयुबमा हेरें, ओलीलाई कहिले हजुरबा भन्छ, कहिले के भन्छ। घोर बेइज्जती गरिरा’छ ओलीजीको। तैपनि उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ। मैले मार्सी भात खुवाएकै हो भन्छ। यो त लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो। आमजनता त्यसै सडकमा आएका होइनन्। यी सरकारका विरोधी होइनन्। सरकार खसोस् भन्ने पनि हाम्रो कुरा होइन। तर सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ। नत्र ‘अनपपुलर’ हुन्छ। मेरो फेरि पनि आग्रह छ, यो सामाजिक आन्दोलन हो। डा. केसीको माग पूरा नभए देशमा आगो बल्छ।
शनिबार डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा भएको प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मन्तव्यको सम्पादित अंश
अघिल्लो लेखमाकांग्रेस सभापति देउवाले भेटे प्रधानमन्त्री, बानेश्वर झडपबारे चासो व्यक्त
अर्को लेखमाविश्व हिन्दु महासंघका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष भरतकेशर सिंहको निधन